कर्णालीमा एमाले बलियो कि एकीकृत समाजवादी?
राजनीति लक्ष्मी भण्डारी
माधवकुमार नेपाल पक्ष बलियो रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले विभाजनपछिको तस्वीर प्रष्ट भएको छैन। तैपनि, अहिलेसम्म खुलेका नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई हेर्दा नयाँ पार्टीको दबदबा देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिलाई एमाले र जसपा छाड्ने म्याद २२ भदौसम्म
नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग गर्न २२ भदौसम्मको समय दिइएको छ।
प्रदेश २ मा मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर
प्रदेश २ का दुई जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ।
माधवकुमार नेपाललाई मन्त्री छान्ने जिम्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाललाई दिएको छ।
नेपाल र भुसाल संसदीय दलको नेता चयन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ।
एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा बस्दिनँ : नेपाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्।
एमाले पार्टी फुटेको होइन, अलिकति चोइटिएको हो : ओली नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटेको भन्न नहुने बताएका छन्।
प्रदेश २ मा लोसपा भन्दा जसपा बलियो महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भन्दा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेश २ मा बलियो देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम : केन्द्रीय सदस्यमा ओली र प्रदेश सदस्यमा नेपालको पकड नेकपा (एमाले) विभाजनसँगै सुदूरपश्चिमका नेताहरू पुरानै पार्टीमा रहने कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा जाने भनेर छलफलमा जुटेका छन्। केहीले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका छन् भने केहीले साथ छाडेका छन्।
कांग्रेस सभापतिमा उठ्न लागेका निधिलाई क्रियाशील सदस्य भन्दा धर्मगुरुमाथि भरोसा! मंसीरमा हुने भनिएको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर काठमाडौंको थापागाउँमा शुक्रबार सम्पर्क कार्यालय खोलेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कार्यालय उद्‌घाटनका क्रममा नेता-कार्यकर्ता भन्दा बढी धर्मगुरुहरूमा विश्वास रहेको संकेत गरे।
प्रदेश–२ मा ओली बलियो कि नेपाल? प्रदेश–२ का अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा लागेका छन्। तर, दुवै पक्षले यो प्रदेशमा आफ्नो पार्टी बलियो भएको दाबी गर्न छाडेका छैनन्।
चुनाव नहुँदै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पार्टीको संख्या दोब्बर थ्रेसहोल्ड राखेपछि घटेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या फेरि बढेको छ।
एमाले विभाजनपछि यस्तो छ लुम्बिनीको गणित २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टी रोज्न पाउने व्यवस्था छ। तर, हालसम्मको अवस्था हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले विभाजनको प्रभाव शून्यप्रायः देखिन्छ।
नेता-कार्यकर्तालाई एकीकृत समाजवादीमा आउन माधव नेपालको अपील नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)का नेता-कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा आउन अपील गरेका छन्।
सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध एमाले अदालत जाने
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगले कानून विपरीत दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा (एमाले) अदालत जाने भएको छ।
एकीकृत समाजवादीमा गएका नेतालाई निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय
नेकपा (एमाले)ले नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा गएका नेतालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ।
क्याबात १० स्थानीय सरकार!
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगर जस्तो एक अर्ब ९४ करोडको बेरुजुको चाङमा बस्ने मात्रै होइन, जनउत्तरदायी बनेर सर्वदलीय संयन्त्रले वर्षौं थुपारेको बेरुजुलाई ०.०६ प्रतिशतसम्म झार्ने स्थानीय सरकार पनि छन्।
भीम आचार्य बने प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नेकपा (एमाले)का सांसद भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
पार्टी विभाजनपछि ओलीले बोलाए केन्द्रीय कमिटी बैठक माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मान्यता पाएसँगै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्।
एमाले र जसपाबाट छुट्टिएर बनेका दुई नयाँ दलले पाए मान्यता नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएर बनेका दुई वटा नयाँ दलले मान्यता पाएका छन्।
यी हुन् नेपालको पक्षमा सनाखत गर्ने केन्द्रीय सदस्य र सांसद नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा नेकपा (एमाले)का ५५ केन्द्रीय सदस्य र २९ सांसदले सनाखत गरेका छन्।
महन्थ ठाकुरको पक्षमा १४ सांसदको सनाखत महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १४ जना सांसदले सनाखत गरेका छन्।
एमाले विभाजन हुँदा ओलीले पाएको सफलता पार्टीमा लामो समयको घर्षणपछि एमाले फुटमा पुग्दा माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई आफूसँग रोक्न सफल केपी ओलीले फुटको ठूलो क्षतिबाट पार्टीलाई जोगाएका छन्।
अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छु : ओली नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्।
झलनाथ खनालले दिल्लीबाटै गरे सनाखत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासबाट सनाखत गरेका छन्।
प्रदीप नेपाल पनि एकीकृत समाजवादीमा नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप नेपाल पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा उभिएका छन्।